Cross Gene ရဲ့ Second Album သစ် ထွက်မည် – Korea Celebrities Fans
​Cross Gene ရဲ့ Second Mini Album ထွက်မည် 
Bule Sea ထဲက ထယ်အို တို့အဖွဲ့ Cross Gene ဟာ သူတို့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် mini Album ကို ဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ။
သီချင်6းပုဒ်ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး Album Title ကတော့ Mirror ပါ !
❤ Teaser သီချင်း White Mind ကို တော့ January 31 ရက်နေ့မှာ ပြသခဲ့ပါတယ် ။
 Feb3ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိမယ့် Black Mind ရဲ့ Taeser Photo တွေကိုလည်း ဖြန့်ထားပါတယ် ။
White Mind လေးကိုတော့ Korea Celebrities Fans မှာ တင်ပေးသွားပါမယ် ! Feb4ရက်မှာ Black Mind လာမယ် 
ဘူးကြစမ်း .. COM မှာ !  Page က သေနေ တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ! မအားတော့ ကောင်းတာလေးတွေပဲ ရွေးတင်ပေးမယ် 
 Korea Celebrities Fans 
Instagram ::: kcele_fans
Next Next post: Ji Chang Wook နဲ့ Shim Eum Kyum ရဲ့ ကို့ယို့ကားယားဆက်ဆံရေး